Yakapetwa SC fiber inokurumidza chinongedzo, China Yakaburitswa SC fiber inokurumidza yekubatanidza vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Qingdao yakashandiswa photonic matekinoroji co., Ltd
Imba>chigadzirwa>FTTH Series>Yakapetwa SC Kurumidza Kubatanidza > Chigadzirwa chigadzirwa
Yakapetwa SC fiber inokurumidza chinongedzo
Fiber optic connector, inowanzozivikanwa se fiber optic connector, inowanzonzi fiber optic connector. Icho chigadziriswazve chishandiso chisina kugadzirwa chinoshandiswa kubatanidza tambo mbiri kana tambo kuti dzigadzire dzichienderera nzira yemaziso. Izvo zvave zvichishandiswa zvakanyanya mumagetsi ekufambisa mitsara uye mafirita ekuparadzira fiber. Uye Optical fiber bvunzo zviridzwa uye metres ndizvo zvinonyanya kushandiswa optical passive zvinhu.
1. Optical performance: Yeye optical performance zvinodiwa zve fiber optic zvinongedzo, iwo maviri akakosha parameter ekuisa kurasikirwa uye kudzoka kurasikirwa anonyanya kushandiswa.
Kuisa Kurasikirwa ndiko kurasikirwa kwesimba rinoshanda reanyowani yeiyi link yakakonzerwa nekuunzwa kwechinhu chinobatanidza. Izvo zvidiki kuisirwa kurasikirwa, zvirinani. Kazhinji, chinodikanwa hachifanirwe kuve chinopfuura 0.5dB. Kudzorera Kurasika (Reflection Loss) zvinoreva kugona kwechibatanidzi kudzvinyirira kuratidzwa kwesungano simba remagetsi, uye kukosha kwayo kunofanira kunge kusiri pasi pe25dB. Mukushandisa chaiko kwechibatanidza, pamusoro penzvimbo pakave kwakakwenenzverwa kuita kuti kurasikirwa kwekudzoka kuve kukuru, kazhinji kusiri pasi pe45dB.
2. Kuchinjanisa, kudzokorora
Iyo fiber optic chinongedzo chinhu chepasirese chisina chinhu. Kune yakafanana mhando ye fiber optic chinongedzo, inogona kushandiswa mune chero mubatanidzwa uye inogona kushandiswa kakawanda. Naizvozvo, iyo yekuwedzera kurasikirwa yakaunzwa kazhinji isingasviki 0.2 dB.
3. Tensile simba
Kune yakanaka fiber optic chinobatanidza, iyo yakasimba tensile inowanzo fanirwa kunge isiri pasi pe 90N.
1) Metro / Access Kutaurirana Networks
2) Fiber Optic Zviridzwa
3) CATV Sisitimu
4) Optical Signal Kugovera